नेपाली एक हजार र पाँच सयका नोट नचल्ने ? – 24updatemedia
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको खबर आउन थालेपछि सरकारले विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न थालेको छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
नेपालको पछिल्लो मौद्रिक नीतिले कम्तीमा सात महिनाको आयात धान्न सकिने उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपाल सरकारले विदेशी मुद्रा देश बाहिर जान नदिने नीति अवलम्बन गरिरहेको छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
तर, मौद्रिक सञ्चिति कायम राख्न आयात र विदेशी मुद्रा आर्जनमा कडाई गर्नुपर्ने सुझाव केही विज्ञले दिएका छन् ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
अर्कोतर्फ नेपालले अन्य मुलुकबाट सामान किन्न डलरमा तिर्नु पर्ने भएकाले आयात खर्च बढेकाले अहिलेको समस्या आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दियो ।नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख स्रोत भनेको रेमिट्यान्स हो ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
नेपालको जीडीपीमा यसको योगदान २२ प्रतिशत रहेको छ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
त्यो भन्दा अघि नै उक्त नोटहरु भएका मानिसले बैकमा लगेर राखिसक्नुपर्ने निश्चित समय तोक्नेछ । त्यो समयमा बैकमा नबुझाएमा पैसा कागज समान हुने नीति अख्तियार गर्न सकिन्छ स्रोतले भन्यो । भारतलेपनि केही बर्ष अघि नोटबन्दीको निर्णय लिएको थियो ।
नेपालमा आयात हुने बस्तु धेरै जसो विलासिताका रहेका छन् । विलासिता घट्यो भने आयात घट्छ । आयात घटेमा मौद्रिक सञ्चिति कायम राख्न सकिनेछ । यसैलेपनि नोटबन्दीको निर्णय उपयुक्त हुनेछ । योसँगै गलत गरेर आर्जन गरेको धनपनि राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुनेछ । समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
Previous यौ,न दु,र्व्य वहारको घट,नामा नाम जोडिएपछि माल्भिकाले माफी माग्दै के भनिन्?
Next के हुन्छ बेलाबेलामा वी’र्य नफाल्दा?यस्तो छ डाक्टरको ड’रलाग्दो भनाइ!